Xubin ka tirsan Al Shabaab oo lagu qabtay Duleedka Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xubin ka tirsan Al Shabaab oo lagu qabtay Duleedka Muqdisho
War kasoo baxay Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa waxaa lagu shaaciyey in Ciidamada ammaanka howlgal ay ka sameeyeen deegaanka ceelasha Biyaha ee duleedka Muqdisho lagu soo qabtay Xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab,isla markaana ka mid ahaa amniyaatka Al-Shabaab.
Howlgal aan cidi wax ku noqon oo ciidanka amnigu ka fuliyay Ceelasha Biyaha ayaa waxaa lagu soo qabtay howlwadeen Amniyaatka Alshabaab ka tirsan. Saraakiisha amniga ayaa ku haya baaritaan la xariira howlaha gurracan ee uu ku jiray ayaa lagu yiri War lagu daabacay Barta Twitter-ka ee Hay’adda NISA.
Sidoo kale NISA ma shaacin Magaca Shaqsiga ay sheegeen inay soo qabteen sidoo kalena ma baahin sawirkiisa,hayeeshee waxa uu kusoo aadayaa xilli habeen ka hor howlgal ka dhacay degmada shibis lagu soo qabtay Xubin ka tirsanaa Al-Shabaab oo dilal qorsheysan ka fulin jiray degmooyin ka tirsan Gobolkan Banaadir.
FAAH FAAHIN: Weerar ka dhacay Baydhabo
Somalia: Two soldiers hurt in bomb explosion